ရေကူးဝတ်စုံရောင်းချသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်ရေကူးအ ၀ တ်ထုတ်လုပ်သူများ
Xiamen Westfox Imp ။ & Exp.Co ။ , Ltd.
Sport Bra & Tops များ
Leggings & ဘောင်းဘီတို
Hoodies & Sweatshirts များ
အရည်အသွေးမြင့်ဒီဇိုင်းသစ်နှင့် Men Pullover Fleece Hoodie
Yoga လက်ရှည် Half Zip Sweatshirt အပြေး
Thumb Holes Workout Running Track နှင့်အတူ Zip Up Yoga Jacket အပြည့်
အမျိုးသမီး Sport Bra ကျောပိုးအိတ်အပြေးနားကြပ်ပေါက်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1. ကမ်းခြေဘောင်းဘီတိုအမျိုးသားများအတွက်စင်းနှင့်ပန်းပုံနှိပ်ခြင်း ၂။ စိတ်ကြိုက်လိုဂိုကမ်းခြေဘောင်းဘီတို 3. လျင်မြန်ခြောက်သွေ့၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းပြီးပေါ့ပါးသည်။ ကမ်းခြေ (သို့) ရေပြင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ အမျိုးသားများသဲသောင်ပြင်ဘောင်းဘီတိုလက်ကားထည်အမျိုးအစား ၁၀၀% Polyester ဖျန်းဖျင်အသေးစိတ် Polyester အသားတံဆိပ် Logo ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) ပန်းထိုး MOQ ၅၀၀ ကျပ်စတိုင်တစ်ခုစီပေးပို့ချိန် ၃၀-၄၅ ရက် PP နမူနာခွင့်ပြုချက်ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များ L/C, T/T ပုံပြခြင်းအရွယ်အစား ဇယား ...
Recycled Beach Shorts စက်ရုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1. ကမ်းခြေဘောင်းဘီတိုအမျိုးသားများအတွက်စင်းနှင့်ပန်းပုံနှိပ်ခြင်း ၂။ စိတ်ကြိုက်လိုဂိုကမ်းခြေဘောင်းဘီတို 3. လျင်မြန်ခြောက်သွေ့၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းပြီးပေါ့ပါးသည်။ ကမ်းခြေ (သို့) ရေပြင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ အမျိုးသားများသဲသောင်ပြင်ဘောင်းဘီတိုလက်ကားထည်အမျိုးအစား ၁၀၀% Polyester ဖျန်းဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့အသားတံဆိပ် Logo ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) ပန်းထိုး MOQ ၅၀၀ ကျပ်စတိုင်တစ်ခုစီပေးပို့ချိန် ၃၀-၄၅ ရက် PP နမူနာခွင့်ပြုချက်ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ L/C, T/T ရုပ်ပုံပြခြင်း .။
ရေကူးဝတ်စုံ Beachwear စက်ရုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ အမျိုးသားများအတွက်ရေကူး surf board ဘောင်းဘီတို ပြန်လည်အသုံးပြုဘုတ်အဖွဲ့ဘောင်းဘီတိုအတွက် elastic band နှင့် 2. ဆွဲကြိုး။ 3. လျင်မြန်ခြောက်သွေ့၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းပြီးပေါ့ပါးသည်။ ကမ်းခြေ (သို့) ရေပြင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ Recycled Board Shorts OEM Fabric Type 100% Polyester Fabric Specification UV Protective fabric Logo Print, Heat Transfer or Embroidery MOQ ၅၀၀ ကျပ်စတိုင်တစ်ခုစီပေးပို့မှုပုံစံများ PP နမူနာခွင့်ပြုချက်မှရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၅ ရက်
Men Board Shorts စက်ရုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁ ဘုတ်ဘောင်းဘီတိုများအတွက်အမျိုးသားများအတွက်ပုံနှိပ်ပုံစံအသစ် ဘုတ်ဘောင်းဘီတိုအတွက် elastic band နှင့် 2. ဆွဲကြိုး။ ၃။ လျင်မြန်ခြောက်သွေ့သော၊ အသက်ရှုရလွယ်ကူပြီးပေါ့ပါးသော ၄။ ကမ်းခြေနှင့်ရေပြင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။ Item Men Board Shorts Factory Fabric Type 100% Polyester Fabric Specification Quick dry polyester fabric Logo Print, Heat Transfer or Embroidery MOQ 500 pieces စတိုင်တစ်ခုစီကိုပေးပို့ချိန် ၃၀-၄၅ ရက် PP နမူနာခွင့်ပြုချက်ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ L/C, ...
Front Zip Full Body Diving Suit ဖြစ်သည်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။MATERIAL: အလွန်ဆန့်သော neoprene ၃ မီလီမီတာအထူ ၂. ဇစ်ပါပိုးများ ၃။WATERSTOP SEAL: ကော်လာတွင်ချောမွေ့သောအသားအရေ neoprene အတွင်းပိုင်း၊ လက်နှင့်ခြေထောက်များကိုသင်၏အရေပြားကိုတင်းကျပ်စွာကပ်စေရန်နှင့်ရေအနည်းငယ်ပိုပါ ၀ င်သောအရာများ Front Zip Full Body Diving Suit Fabric Type Neoprene Fabric Specification Neoprene Blend Fabric Size SML XL XXL Logo ယက်တံဆိပ်ပေါ်တွင် ...
အမျိုးသမီးရေကူးဝတ်စုံ 1 Piece Tummy Control Slimming Ruched Swimwear Bikini Beachwear
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ သင့်အားတစ် ဦး ချင်းသက်တောင့်သက်သာနှင့်ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ရန်ချိန်ညှိနိုင်သောကြိုးများ သုညဝါယာကြိုးနှင့်အတူ 2. ခွက်များ ၃။ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုနေရာ၌ထားရှိရန်အလွှာသုံးလွှာ ၄ င်းတို့သည်သင့်အား ၀ င် ရောက်၍ သက်တောင့်သက်သာရှိစေသောဤကျိုးနွံပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောဝတ်စုံကိုအလွန်အကျွံပြသခြင်းအတွက်သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်အလျင်စလိုအသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏အလယ်တစ်ခြမ်း၌ပိန်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာအချို့ကို ၀ ယ်စားရင်တောင်သင့်ဝတ်စုံအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါ။
အမျိုးသားရေကူး ၀ တ်စုံရေကူးရေကူးဝတ်စုံဘောင်းဘီတို Pad ရေကူးဘုတ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိစက္ကူ ၂. ဥရောပအရွယ်အစား၊ အမေရိကန် ၃.၁၀၀% မူရင်းထက်သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး ၄။ ဆေးကြောရာတွင်အရောင်မပြဲစေပါ။ ၅။ ရှေ့ဖက်အတွင်းအပြင်အပြား ၇။ စိုစွတ်သော၊ လူအများရှေ့၌အရာများကိုဖုံးကွယ်ရန်ကောင်းသောထိတွေ့ပါ။ အမျိုးသားရေကူးဝတ်စုံရေကူးရေကူးရေကူးဘောင်းဘီတို Pad ရေကူးဘောင်းဘီဘောင်းဘီတိုဘောင်းဘီတိုထည်အမျိုးအစား ၈၂% နိုင်လွန်၊ ၁၈% Spandex ဖျင်သတ်မှတ်ချက်အပြာရောင်ဖျော့ဖျော့အရွယ်အစား S-XL ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Logo ပေါ်တွင်တံဆိပ်ရိုက် နှိပ်၍ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ပါ။
Polyester အထည်ပုံသဏ္န်ထိန်းသိမ်းမှု Square Leg Suit Mens သက်တောင့်သက်သာရှိသောရေကူးဝတ်စုံ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ Elasit ခါးနှင့်ခါးတွင်ဆွဲကြိုးတစ်ချောင်း။ ဝတ်စုံအတွင်းမှရှေ့တွင် liner ပါရှိသည်။ လေ့ကျင့်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် 2.Perfect ၃။ ပုံသဏ္န်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လျင်မြန်စွာအခြောက်ခံခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော UV ကာကွယ်မှု၊ ကလိုရင်းဓာတ်များ၊ ပြီးပြည့်စုံမှု၊ အလွန်အစွမ်းထက်သောအသက်ရှုနိုင်မှုပစ္စည်းများ Polyester အထည်ပုံသဏ္Retန်ထိန်းသိမ်းမှုစတုရန်းခြေထောက် Suit Mens သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သောရေကူးအမျိုးအစား ၈၂% နိုင်လွန်၊ ၁၈% Spandex ဖျင်သတ်မှတ်ချက် UV ကာကွယ်မှုဖျင်အရွယ်အစား S-XL မင်းလိုဂိုကိုရွေးဖို့အတွက်အများအားဖြင့်အပူကူးတာကိုသုံးတယ်။
အင်္ကျီလက်ရှည်အမျိုးသမီးရေကူးဝတ်စုံ Halter Push Up Top Boyshort Bikini Set Two Piece Bathing Suit Swimwear
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ ပြောင်းပြန် V စတိုင်ချိန်ညှိနိုင်သောကြိုးများ၊ အပေါ်သို့တက်ပါ၊ တပ်ဆင်ထားသောအားကစားဘရာစီယာ၊ Elasticity boyleg အောက်ခြေ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးလှပသောကျောကွေးကိုပြသပေးသည်။ 2.Feature: Retro ပန်းပွင့်ပုံရေကူးဝတ်စုံနဲ့အစုံကမင်းကိုလန်းဆန်းတဲ့အကြည့်ကိုပေးတယ်။ Solid colotr bikini set သည်ကြော့ရှင်းပြီးကြည့်ကောင်းသည်။ ဒီနှစ်ပိုင်းရေကူးဝတ်စုံတွေနဲ့အံ့သြစရာရေပျော်စရာကိုသာခံစားလိုက်ပါ။ 3.Occasions: လူငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများအားလပ်ရက်များအတွက်စတိုင်ကျသောနှစ်ထပ်ရေချိုးဝတ်စုံ။ ရေကူးကန်၊ လှိုင်းစီးရန်၊ ရေကူးကန်နှင့်သင့်တော်သည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Boyshort Push Up2Piece Swimsuit Bating Suit နှင့် Halter Bikini Set
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ ဒီဇိုင်း-လူငယ်များနှင့်အမျိုးသမီးများအားလပ်ရက်များအတွက်နှစ်ထည်ရေချိုးဝတ်စုံ။ V လည်ပင်း၊ အပေါ်သို့တက်၊ တပ်ဆင်ထားသော Sports Bra၊ Adjustable Tie Side Boyleg Bottom, Criss Cross Halter Back တို့ကသက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးလှပသောကျောကွေးကိုပြသပေးသည်။ ကမ်းခြေ၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်၊ ရေကူးကန်၊ ရေပူစမ်း၊ အားလပ်ရက်နှင့်ပါတီ။ ချစ်စရာကောင်းပြီးချော့မော့သည်။ Zando ရေကူးဝတ်စုံနှင့်သင်ပျော်ရွှင်ပါ ၃ သတိပြုရန်။
Surfing Spearfishing အားကစား
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ နူးညံ့ပြီးဇိမ်ကျသော Lycra spandex ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရေပြားသည်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ အရောင်မှိန်ခြင်းမရှိ၊ အလွန်ဆန့်သော Spandex သည်ပြီးပြည့်စုံမှုကိုအာမခံသည်။ ၂။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော elastic ပါ ၀ င်သောအသားရေဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းသည်လှုပ်ရှားမှုအားမကန့်သတ်ထားဘဲရေ၌လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ၃။ အထူး UV အကာအကွယ်အလွှာပါ ၀ င်သောကိုယ်ထည်နှင့်လက်ရှည်ဒီဇိုင်းသည်နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလျော့ပါးစေသည်။ အသားအရေထိတွေ့မှုဒီဇိုင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးနေရောင်ခြည်ဒဏ်မှသင့်အသားအရေကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အမျိုးသားများအတွက် 3mm Wetsuit
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.3mm Neoprene Camouflage Diving Suit သည်လုံလောက်သောအပူကာကွယ်မှုနှင့်ပင်လယ်မှိုများ၊ ဂျယ်လီများနှင့်အခြားဇီဝဓာတ်မတည့်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ 2. Back Zipper extra အပိုကြိုးရှည်နှင့်ခိုင်ခံ့သော YKK ဇစ်ကိုလွယ်ကူစွာအ ၀ င်အထွက်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၃။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ets Wetsuit ကိုရေနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဝတ်စုံများသည်သင်၏နွေးထွေးမှုကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ Mens 3mm Wetsuits Fabric Type Super stretch neoprene Fabric Specification neoprene Blend Fabr ...
အမျိုးသားအားကစား ၀ တ်ထားသောအနားကွပ်ပါဘောင်းဘီတို
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။Velcro ပိတ်ခြင်း၊ ချိန်ညှိနိုင်သောကြိုး ၂.One side velcro အိတ်များ ၃။ လျင်မြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးခြင်း 4. ကမ်းခြေသို့မဟုတ်ရေပြင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သောအရာများအမျိုးသားအားကစား ၀ တ်စုံများအမြန်အခြောက်ဘုတ်အတို၊ Lining Fabric Type 95% polyester, 5% Spandex Fabric အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်လျင်မြန်ခြောက်သွေ့၊ လေ ၀ င်လေထွက်နှင့်ပေါ့ပါးသောအထည်အရွယ်အစား ၃၂၊၃၄၊၃၆၊၃၈ Logo ပန်းထိုး (သို့) အပူလွှဲပြောင်းမှုအိတ်ကပ်တွင်အရောင်မျိုးစုံအရောင်အစင်း ၁ ထုပ်/polybag (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက် MOQ ၃၀၀၀၀ စီ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.Drawstring ပိတ်ခြင်း 2. ရှုံ့ထားသော Elastic ခါးပတ်သည်မည်သည့်ရွေ့လျားမှုကိုမဆိုအခြောက်ခံခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းရှိအပိုထောက်ပံ့ခြင်းကိုပံ့ပိုးပေးသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစတိုင်လ်ဒီဇိုင်းဖြင့်မင်းကိုလူအုပ်ထဲကနေပေါ်လွင်စေသည်။ ၅. တိုတောင်းသောအရှည်သည် ၁၇.၇ လက်မမှ ၁၈.၉ လက်မခန့်ရှိပြီးသင်၏ဒူးခေါင်းအထက်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးပိုမိုကြည့်ကောင်းသည်။
Goodthreads အမျိုးသားများအတွက် ၅ လက်မ Inseam ရေကူးနှာမောင်း
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.These ရေကူးအဆင်သင့်၊ ဂန္တ ၀ င်စည်များသည်သံနှင့်အတူစတိုင်လ်ကိုပေါင်းစပ်။ သတ္တုအစွန်းများနှင့်ဆွဲထားသော၊ ဘေးနှစ်ဖက်အိတ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနှင့်ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောအတွင်းပိုင်းသော့တွဲအိတ် ၂ ခု။ ၃။Inseam အတိုင်းအတာ ၅″ Item Goodthreads အမျိုးသား ၅ လက်မ Inseam Swim Trunk Fabric Type 90% Polyester, 10% Elastane Fabric Specification အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်လေးဆန့်ဖျင်ထည်အရွယ်အစား M-XXL တို့အတွက်သင်ရွေးချယ်လိုသော Logo အတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁. အခါအားလျော်စွာ၊ နေ့စဉ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ကမ်းခြေ၊ အလုပ်၊ ရက်၊ Oustside၊ အိမ်၊ ဧည့်ခန်း၊ အားလပ်ရက်၊ နွေရာသီ၊ နွေ ဦး၊ ဆောင်း ဦး ၂ ။ ၃။ စတိုင်လ်၊ ချောင်ချောင်၊ အင်္ကျီ၊ တီရှပ် ၀ တ်စုံ၊ တင့်ကား ၀ တ်စုံ၊ လွှဲ ၀ တ်ပုံ၊ A-line၊ ပုံစံ၊ bohemian၊ Woven Label အရောင် PINK Pac On တွင် XL Logo
နွေရာသီ Maxi Dress
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1.Fabric တွင်ဆွဲဆန့်ခြင်းမရှိပါ။ ၂။ ထူးခြားချက် - အအေးပုခုံး၊ အပေါက်၊ ပန်းပွင့်၊ V လည်ပင်း၊ Ruffle၊ ကွဲ၊ ထုပ်၊ ခါးပတ်၊ ချည် ၃ ကြိမ်။ ၄။ ဂရုစိုက်ပါ၊ ရေအေးဖြင့်လက်ဆေးပါ။ အခြောက်ခံရန်အရောင်ချွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မခြောက်ပါနှင့်။ Item Summer Maxi Dress Fabric Type 100% Polyester Fabric Specification Polyester Fabric Size SML XL Logo On Woven Label Color အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ ပန်းရောင် ၁ ထုပ်/polybag (သို့) သင်၏လိုအပ်ချက်များမှာ ၃၀၀၀ Pcs အထက်
ပုံနှိပ် Swing ဂါဝန်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁. အခါအားလျော်စွာ၊ နေ့စဉ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ ကမ်းခြေ၊ အလုပ်၊ ရက်၊ Oustside၊ အိမ်၊ ဧည့်ခန်း၊ အားလပ်ရက်၊ နွေရာသီ၊ နွေ ဦး၊ ဆောင်း ဦး ၂ ။ ၃။ စတိုင်လ်၊ ချောင်ချပ်၊ အင်္ကျီ၊ တီရှပ် ၀ တ်စုံ၊ တင့်ကား ၀ တ်စုံ၊ လွှဲ ၀ တ်၊ ရေစီး၊ A-line၊ ပုံစံ၊ bohemian၊ Woven Label တွင်အရောင်အပြာရောင်၊ ရေတပ်၊ XL တံဆိပ်
Flared Swing ဂါဝန်သည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိသည်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။ အင်္ဂါရပ်များ၊ Midi ၀ တ်စုံ၊ ခါး၊ လက်ပြတ်၊ လည်ပင်း၊ မီးတောက်စကတ်အောက်ခြေ၊ နွေ၊ နွေရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေ ၂ ။ စသည်တို့သည် flared သို့မဟုတ် flowy silhouette အတွက် Midi ၀ တ်စုံ၊ သင်၏ bum ကိုရိုးရှင်းပြီး classy ဒီဇိုင်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာဖုံးအုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် wardrobe တိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Flared Swing Dress ရိုးရိုး Fit အမျိုးအစား 97% Polyester, 3% Spandex Fabric Specification Polyester Blend Fabric ၎ ..။
Beach Party Maxi Dress လေးပါ
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ၁။Maxi သည်ထုပ်ပိုးထားသောဒီဇိုင်း၊ v-neckline၊ frill hemline နှင့်တိုတောင်းသောလိပ်ပြာအင်္ကျီတိုတိုများကိုဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူစေသောဖော်ပြချက်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကန့်အသတ်မရှိ သင်၏နေရောင်စိုစွတ်သောနေ့လည်ခင်းပျော်ပွဲစားတွင်နက်နဲသောအရာမပါဘဲကမ်းခြေသို့လမ်းလျှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆလိုက်များနှင့်ပြည့်လျှံသော ဦး ထုပ်နှင့်တွဲပါ။ သက်တောင့်သက်သာ၊ အမျိုးသမီးဆန်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသော“ နေ ၀ င်ဂါဝန်” သည်စွဲလမ်းစေမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၃။ လက်ဆေးရန်အကြံပြုသည်။ စက်ကိုအေးအောင်ဆေးပါ / အရောင်ချွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
လိပ်စာ အခန်း ၁၄၀၄ ရုံး B၊ စထရိတ်စီးပွားရေးစင်တာ ၈၉၃၊ HaiCang၊ ရိပ်သာ Xiamen၊ တရုတ်
Xiamen Westfox Imp ။ & Exp.Co. , Ltd ။ ©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၁၀-၂၀၁၉ ။